Zavatra 16 mety hanelingelina anao ao amin'ny Ubuntu 10.04 Lucid Lynx | Avy amin'ny Linux
Zavatra 16 izay mety [hanelingelina] anao ao amin'ny Ubuntu 10.04 Lucid Lynx
Mahaliana ny Ny lahatsoratr'i Benjamin Humphrey, mpitarika ekipa ny tetikasa Ubuntu Manual, izay efa namoaka lahatsoratra iray misy fanovana 16 amin'ny interface Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx fa amin'ny tranga maro dia tsy manana fanamarinana mazava izy ireo ary afaka manelingelina ireo mpampiasa ity fizarana ity.
Navoaka tao amin'ny ANDRIAKAKY Ô! Ubuntu nahazoana alalana avy amin'ny mpanoratra, mba hahafahanao mamaky azy io koa. Manao fampisehoana tsotra aho fandikana / fampifanarahana mihombo kokoa amin'ireo teboka 16 ireo noheverin'i Humphrey izany.
Marihina fa ny ankamaroan'izy ireo dia miresaka olana momba ny fampiasana, ary ny maro amin'izy ireo koa dia ny hevitr'i Humphrey manokana izay mety tsy ho zakan'ny sasany aminareo, saingy mbola lahatsoratra iray tokony hodinihina. Mahaliana ihany koa fa i Humphrey dia mihevitra ny fiheverana fa ny fahasosorana toy izany dia mety hitranga amin'ireo olona avy amin'ny Windows ary te-hanandrana ny Linux, zavatra mahaliana.
Ny olan'ny 16 Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx no ho manaraka arak'io lahatsoratra io:
Fanaraha-maso ny varavarankely: azo antoka fa efa namaky momba an'io ianao. Ny fifehezana ny fanidiana, ny fanamafisana ary ny fampitomboana ny varavarankely dia eo ankavia fa tsy amin'ny ankavanana, toy ny taloha. Fahadisoana izany satria tsy zatra an'izany ny mpampiasa Ubuntu, nefa mitranga ihany koa amin'ireo izay avy amin'ny Windows.
Mangarahara ratsy ao amin'ny faritra fampandrenesana: Olana madinidinika amin'ny hevitro, fa ny iray izay tokony nalamina efa ela be izay satria efa nisy hatramin'ny alphas voalohany an'ny Karmic. Ny olana dia ny icon "tsy standard" dia tsy mifangaro tsara amin'ny faritra fampandrenesana.
Rythmbox dia mangataka plugins hatrany: Tsy mampiasa Rythmbox aho, fa toa ao amin'ny Lucid Lynx ity app ity dia mangataka plugins ho an'ny codecs izay efa napetrantsika.
Bara fandrosoan'ny Center Software: raha marina ny pikantsary ampidiriny ao, mazava ho azy ny bara fandrosoana izay manondro ny halaviran'ny fandrosoantsika amin'ny fizotry ny fampiharana iray dia loza voajanahary. Phew.
Ikona Menu: eto ny mpanoratra tany am-boalohany dia sarotiny kokoa noho izaho, satria angatahiny mba ho eo daholo ireo sary masina, na tsy misy ireo, fa tsy hoe misy ny sasany ary ny hafa tsy eo. Marina ny anjarany - inona no vidin'izy ireo raha manao azy rehetra? Nefa zavatra tsy manelingelina manokana izany.
Margin amin'ny fampandrenesana: piss hafa iray manelingelina an'i Humphrey ary azo ahitsy amin'ny fikarakarana kely.
Be loatra ny faritra fampandrenesana: eny, eto ny tsiro dia apetraka, satria misy olona maro izay mankasitraka ny fananana fampahalalana marobe ao anatin'ilay tontolon'ny andiany. Manala toerana izany, ohatra, ny fananana ny.
Endritsoratra default, tondro fampiasa: indray, resaka subyektifika kely. Aleon'ny mpanoratra ny endritsoratra kely, manomboka amin'ny 8 teboka ka hatramin'ny 96 dpi, fa tsy ny endritsoratra 10 isa sy 96 dpi mahazatra, ary mitovy ihany ny an'ny mpanondro, izay tokony ho kely kokoa araka ny filazany. Holazaiko fa miankina amin'ny famahana ny efijery io fa tsy ny zavatra hafa rehetra, saingy tsy fanovana izay sarotra ho an'ny mpampiasa ny mampihatra azy ireo raha tsy mahazo aina izy ireo.
Ctrl + Alt + Delete- Ny fampifangaroana lakile malaza dia tokony hampiseho ny fanaraha-maso ny rafitra fa tsy hahatonga antsika hivoaka, hoy ny mpanoratra. Ambonin'ny zavatra rehetra, hoy izy, ho an'ireo olona avy amin'ny Windows ary zatra izany fihetsika izany. Tsy maintsy ekeko fa mbola ampifandraisiko amin'ilay mpitantana ny asan'ny Windows io fampifangaroana io, saingy toy ny teboka maro hafa, dia somary mifehy izany.
Tokony hamaivanina ny Pidgin fa tsy akatona: Tsy mampiasa Pidgin aho, noho izany tsy mbola niainako izany fahasosorana izany, saingy nilaza ny mpanoratra fa rehefa nakatona ny varavarankelin'ny fifandraisana dia mikatona ny fampiharana, raha ny marina dia tokony hahena ary ajanona ao amin'ny tontonana ao amin'ny rafitra izany, tahaka ny mahazo an'i Empathy. Eny, amin'ny fangatahana, ny marina dia marina ny azy.
Veloma amin'ny Computer Janitor ("Cleaner"): Eto aho dia tsy maintsy manaiky tanteraka an'i Humphrey, izay manondro fa manadio ny masininao ity mpamosavy ity, nefa manaparitaka ny fiankinan-doha sy ny lozisialy napetrakay avy amin'ny fonosana .deb. Loza. Na dia miharihary aza ny fanafody: aza mampiasa ity programa kely ity fotsiny.
Goavana ny safidin'ny safidinao: marina, ary toa isaky ny mampatsiahy antsika ireo dropdown Windows 95/98 / XP tsy misy farany io. Tokony hiezaka ny handahatra izany amin'ny fomba sasany izy ireo.
Ny applet ho an'ny volume dia ratsy tarehy: teboka somary mifehy lohahevitra indray. Mitaraina ny mpanoratra fa fohy loatra ny tsipika fitetezana, ary tokony hokambana tsara kokoa ny safidy. Pijaditas eny, angamba azo hatsaraina izy ireo.
Antontan'isa fampiasana bateria: rehefa manindry ny kisary bateria dia misy fampahalalana tena manokana momba ny karazana bateria hita, saingy tsy mila izany fampahalalana izany izahay, fa kisary iray fotsiny izay mampiseho amin'ny antsipiriany ny fotoana sisa tavela alohan'ny lany ny bateria.
MeMenu dia tsy maninona ny sary momba ahy: fiasa izay tokony ho azon'izy ireo ampiharina mba tsy hampiorina misaraka ny iray sy ny avatar hafa, saingy toa tsy dia zava-dehibe amiko izany. Na dia miakatra aza ny zava-drehetra, mazava ho azy.
Azo antoka fa misy zavatra kely mahasosotra kokoa, fa ny lisitry ny lahatsoratr'i Humphrey dia tena mahaliana, indrindra satria satria nilaza izy miaraka amin'ny lohatenin'ilay lahatsoratra, io ny pitsopitsony kely izay. Ary marina ny azy.
Hita ao | Tena Linux
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Zavatra 16 izay mety [hanelingelina] anao ao amin'ny Ubuntu 10.04 Lucid Lynx
Junior dia hoy izy:
Ny menus dia namboarina tsotra fotsiny tamin'ny "gconftool-2 –type Boolean –set / desktop / gnome / interface / menus_have_icons True" be dia be ny fitarainana mba ho tsotra tokoa ny manamboatra azy, farafaharatsiny nataoko tamin'ny karmic koala izay manana olana mitovy
Valiny tamin'i Junior
Rafael dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Ny sasany amin'ireto zavatra kely ireto dia efa raikitra. PS: Miala tsiny amin'ny Espaniola 🙂
Valiny tamin'i Rafael
Mahaliana, azonao lazaina aminay ve izay zavatra namboarina? Mihobia! Misaotra naneho hevitra !!
Fernando dia hoy izy:
Ny ankamaroan'ireo "fitarainana" ireo, raha ny tena izy, dia mamely ahy ho tena mahatsikaiky an'i Humphrey. Marina fa ny sasany amin'izy ireo dia bug na hadisoana miharihary, fa ny kinova alpha kosa dia mbola miresaka ihany.
Ho fanampin'izany, maro ny hafa no safidy ampanjifaina azon'ny olona ovaina araka izay itiavany azy (mitaraina momba ny endri-tsoratra am-pitoerana sy ny haben'ny pointer?, Azafady!). Raha mankany amin'ireo isika, dia izay rehetra mandefa taratasy any amin'ny Canonical mba hahafahan'izy ireo mamorona lohahevitra manokana ho an'ny mpampiasa tsirairay.
Zazalahy, tia tena ny lehilahy iray ary mieritreritra fa ny fitiavany manokana dia mitovy amin'ny olona manerantany.
Valiny tamin'i Fernando
infernus92 dia hoy izy:
Toa tsy misy mahasosotra ahy loatra… ny hany zavatra mety hahamaina azy dia ny bokotra faran'izay kely-manamaivana-akaiky dia eo ankavia.
ary zavatra tsy manome anarana anarana ao dia ny synaptic dia nesorina ary ny ivon'ny rindrambaiko Ubuntu ihany no mijanona, izay ho an'ny sasany amintsika dia mety manelingelina.
Heveriko ihany koa fa ny fanovana lehibe toy izany dia tsy tokony hatao amin'ny LTS. Nefa ho fantatrao ny antony anaovan'izy ireo izany.
Fa ny zavatra rehetra kosa azo alamina ... ary na iza na iza tsy tia azy, izay manova azy na izay tsy mampiasa azy ... dia tsy voatery hanao an'izany.
Mamaly an'i infernus92
Andramo ny KDE 4, fomba iray izany ry zalahy. Miarahaba antsika rehetra
julius_alpa dia hoy izy:
Heveriko fa bitika izy ireo nefa amin'ny farany dia manelingelina ny mpampiasa izy ireo, aotra Ubuntu ho ahy, soa ihany, famihinana
Mamaly an'i julio_alpa
Toa hitako fa misy zavatra teo foana ary izy dia mimenomenona tanteraka, raha tsy tianao ny zavatra na manelingelina anao, fa tsy manakiana azy, aza mampiasa azy, misy ny solony hafa, tsy tianao ny fifehezana eo ankavanan'ny varavarankely, lohahevitra hafa manana an-dry zareo havanana, ary raha tsy tianao ny gnome dia ampiasao ny KDE, Xfce, na izay tianao, fa aza mimenomenona an'ireo "tsy misy dikany" ireo, satria ataonao tsara
Mamaly an'i junior
jhonoo dia hoy izy:
Tsarovy fa i Lucid Lynx dia eo amin'ny dingana fampandrosoana, fa ireo olana ireo dia azo ahitsy noho ny fiaraha-miasa amin'ireo mpampiasa ity fizarana ity. Mila manam-paharetana isika. Misaotra anao tamin'ity fampahalalana ity
Mamaly an'i jhonoo
Joan Rodas dia hoy izy:
Ny fifehezana amin'ny ankavia no bug lehibe indrindra, na dia azo ovaina amin'ny "gconf-editor" aza izy ireo.
Ny zavatra momba ny sary masina miaraka amin'ny mangarahara dia mitohy mitranga.
Ny zavatra plugins dia tsy mahazo ahy.
Ahena kely ny Pidgin, tsy mikatona intsony.
Niova be ny ivon-toeran'ny rindrambaiko, ary navaozina tanteraka izy io, tsy toy ny amin'ny pikantsary asehonao.
Ny endritsoratra, sary masina, sisin-tany, tondro ary ny fitambaran'ny fanalahidy dia toa hadalana amiko, mandeha tsiro izany.
Any Memenu dia efa voavaha ny sary About Me, ny olana hitako izao dia ny mampiseho bokotra boribory hanondroana ny toerana misy azy.
Nihatsara ny applet volume.
Mbola lehibe ny menio preferences ary heveriko fa misy zavatra azo atao.
@ infernus92: Synaptic tsy nesorin'ny Software Center, mbola eo izy io.
Valiny tamin'i Joan Rodas
southpaw dia hoy izy:
ary arak'io humphrey io dia tsy misy manelingelina ny fijery mahatsiravina ataon'ny fametrahana ny ravina grub? satria io pitsopitsony io dia teraka tamina ubuntu, ary miaraka amin'ny grub2 dia manana zavatra sarotra ho an'ny mpampiasa vao izy ireo raha te hampifanaraka azy
Mamaly an'i Southpaw
gudea dia hoy izy:
3 andro izao no nandinihako ny 10.04 ary nikatona izy io. Tsy vitako ny manova azy ary somary miankina amiko amin'ny tsipìka ihany izany, satria ny tsy fahatomombanana no nanakatonako azy, toy ny nataoko teo aloha ary tsy maintsy nosokafako indray ilay fangatahana, jereo hoe iza no navelako niaraka tamin'ny teny tao am-bava, haverinao ny resaka ... ohatrinona kely ny tsy mahazo aina.
Ho an'ny ambiny, manantena ny faha-29 aho.
Mamaly an'i gudea
paul21 dia hoy izy:
Ay, ay Fernandito… andao hojerentsika: raha ny kinova alpha dia ekeko, na dia tsy mankarary mihitsy aza ny manondro ireo lesoka alohan'ny hiovan'ny fiovana amin'ny interface.
Ubuntu dia vokatra toy ny hafa rehetra, ary tahaka izany ny fanapahan-kevitra momba ny olana GUI aorinan'ny raharaha DO. Fantatr'i Canonical tsara izany ary izany no antony niantombohany tamin'ny tetik'asa Ayatana hanandrana handroso amin'ny faritra iray izay ambanin'ny fifaninanana ny Ubuntu.
Amin'ny tontolo tena izy, miditra amin'ny masony ny vokatra. Tsy maninona na mila tsindry 2 vao hanova ny valiha na hamboarina ny endritsoratra. Ny interface default dia ilay mivarotra. Ny interface tsy mitongilana dia miteraka fahatsapana tsy matihanina, ary mamorona ny hevitra fa tsy dia nandinika firy ny vokatra (na dia tsy izany aza). Izany no antony misy sampana endrika manokana amin'ny famonosana.
Etsy ankilany, maro amin'ireo teboka no miresaka momba ny olana momba ny famolavolana fototra, toy ny elanelana mety, ny habeny ary ny tsy fitovizany amin'ny paleta loko sy ny interface amin'ny ankapobeny. Tsy misy "fitsaboana manokana".
Mamaly an'i paul21
Ary tsara… ho lasa fahazarana izany. Na izany aza, ny zavatra ratsy indrindra amin'ny fanovana ny bokotra fikandrana dia ny programa tsy tafiditra ao amin'ny GNOME, toa ny Chrome / Chromium, dia mbola hanana ny bokotra fikandrana eo ankavanana ... ary eo an-tampony, amin'ny lamina hafa! 🙁
Na izany na tsy izany… manantena ny faha-29 isika rehetra… 🙂 Fihodinana iray! Paul.
KeePassX 0.4.3 - Ny teny miafina rehetra amin'ny toerana iray